Best bhizinesi mota inground simudza akateedzana L7800 Mugadziri uye Fekitori | Tonghe
LUXMAIN Bhizinesi mota inground lift yakagadzira nhevedzano yezvinhu zvakajairika uye zvisina kujairika zvigadzirwa zvakagadzirwa. Inonyanya kushanda kumotokari dzevapfuuri nemarori. Huru mafomu ekusimudza matiraki nemarori ari epamberi neshure kupatsanura maviri-post mhando uye kumberi nekumashure kupatsanurwa ina-post mhando. Uchishandisa PLC kudzora, inogona zvakare kushandisa musanganiswa we hydraulic yekuyenderana + kuomarara kuwiriranisa.
Iyo michina yakagadzirirwa seyaviri-ikholamu pamberi uye neshure yekuparadzanisa mhando. Imwe yemakoramu ekusimudza inogona kuenda kumberi nekumashure. Iyo yakagadzirirwa nemutoro-inotakura aruminiyamu chiwanikwa yekutevera-up cheni ndiro, iyo inogona pakarepo kufukidza pasi grooves. Ivhu rakachengeteka uye rakanaka, uye rinogona kumira nevashandi kana mota dzichisimudzwa. Mota dzerudzi rumwe chete dzinopfuura zvakanaka mumaketani emaketani.
Iyo michina inotora PLC kudzora uye hydraulically inotyaira yekusimudza posvo yekuyenda nekudzoka, chaiyo-nguva chiratidzo cheyakagadziridzwa data, kuona kuti maviri anosimudza mbiru anochengetwa mune chaiyo nguva yekuyananisa. Panguva imwecheteyo, kukundikana kwemidziyo kucharatidzwawo nekukasira, kuyeuchidza mushandi kugadzirisa nekuchengetedza.
Iyo chishandiso inogona kudzorwa munzira mbiri, yekubata skrini uye kure yekudzivirira mubato.
Kana zvichidikanwa kuti uenzanise nzvimbo yekusimudza, mubato wekudzivirira kure unofanirwa kushandiswa kunyatsoona kutonga, kunova kwakarurama uye kwakachengeteka. Iyo mota inopinda chiteshi chekusimudza uye inoona kuti iyo yekusimudza poindi inoenderana nekamisikidzwa mbiru yekusimudza. Dhinda mubato wekudzivirira kure. "Enda kumberi" kana "Dzokera kumashure" kiyi kugadzirisa chinzvimbo chekoramu inofamba uye wirirana nenzvimbo yekusimudza kune kumwe kunopera kwemotokari. Chinja mbiru mbiri dzinosimudza nhanho nhanho kuti umuke kutanga uye ipapo, padhuze nemapoinzi ekusimudza mota, uye wozoshandisa bhatani "kumusoro" kusimudza mota kumusoro.
Iyo michina yakagadzirirwa nevekunze michina yekukiya system, iyo inogona kutaridzika kuona kuti michina yakavharwa kana kukiyiwa. Iyo yemagetsi yekuvhara lever inoshandawo seye rubatsiro rwekubatsira kuona kuchengetedzeka uye kugadzikana kwemidziyo.
Iyo hydraulic yekupaza mudziyo inoshongedzerwa musirinda, iyo isingori chete inovimbisa kukurumidza kukwira kumhanya mukati mehurefu hwekusimudza huremu hwakagadzwa nemidziyo, asi zvakare inovimbisa kuti iyo yekusimudza inodzika zvishoma nezvishoma kudzivirira mamiriro akaipisisa senge mechanical kukiya kutadza kana tubing kuputika mhedzisiro. mutsaona yekuchengetedza yakakonzerwa nekudonha nekukurumidza uye nekukurumidza.
Inokodzera mhando dzakasiyana dze8-12 metres mota refu.
Max. Nokusimudza chinzvimbo 16000kg
Takura kusaenzana kunonyanyisa 6: 2 (iro kumberi uye kumashure redio redzimotokari)
Max. Nokusimudza kukwirira 1800mm
Nharembozha padivi saizi saizi L2800mm X W1200mm X H1600mm
Yakagadziriswa divi inomiririra saizi L1200mm X W1200mm X H1600mm
Kusimudza posvo nzvimbo Min. 4450mm, Max. 6050mm, isina chinogadziriswa
Yakazara kusimudza (kudonha) nguva 60-80s
Simba remagetsi AC380V / 50 Hz
Simba remota 3 kw / 3kw
Pashure: L-E60 Series Nyowani simba mota mota bhatiri rinosimudza trolley
Zvadaro: Yakasarudzika inground yekusimudza akateedzana
Inground Car Simudza
Inground Car Washing Simudza
Imwe Tumira Inground Simudza
Imwe Post Post Yakakomberedzwa Simudza
Inotakurika Hydraulic Scissor Mota Simudza, Nhare Imwe Post Post Kusimudza Mota, Kaviri Post Pasi Pasi Pasi Simudza, Imwechete Kuita Cylinder, Kaviri Post Inground Simudza, Inotakurika Imwe Post Post Mota Simudza,